Tallaalka iyo shaqadaada | The vaccination and your job | Unite against COVID-19
Tallaalka iyo shaqadaada | The vaccination and your job
Inta badan shaqada gudaha New Zealand ayaa hadda ay dhameystiri karaan dadka aanan weli la tallaalin.
Ogow waxa dhaco haddii shaqada aad sameysid u baahantahay inuu sameeyo shaqaale laga tallaalay COVID-19.
Loo shaqeeyaha waa inuu illaaliyaa arimahaaga gaarka ah
Loo shaqeeyaha lama wadaagi karo qofna macluumaad ku saabsan heerka tallaalkaaga, illaa ay ka haystaan ogolaanshahaaga sidaas lagu sameynayo, ama ay jiraan ogolaansho quseyso Xeerka Arimaha gaarka ah.
Looma baahna inaad u sheegtid loo shaqeeyahaaga haddii lagu tallaalay. Haddii aad dooratid inaadan is tallaalin, looma baahno inaad u sheegtid sababta.
Haddii aad ku jirtid doorka u baahan in ay sameeyaan kaliya shaqaalaha tallaalan laakin aadan dooran inaadan u shaacisid heerka tallaalkaaga, loo shaqeeyahaaga ayaa kuu daaweyn karo sida qofaan tallaalneyn, laakin waa inay kuu sheegaan inay taasi tahay waxa ay sameynayaan.
Haddii shaqada aad sameysid u baahantahay inuu sameeyo shaqaale tallaalan
Haddii loo shaqeeyahaaga u maleeyo in shaqo gaar ah u baahantahay inuu sameeyo kaliya shaqaale tallaalan, oo sababo caafimaadka iyo badqabka, waa inay ugu horayn sameeyaan qiimeynta gaarista halista COVID-19. Qiimeyntan waxay u baahantahay in lagu sameeyo iskaashiga shaqaalaha, ururada iyo wakiilada kale.
Qiimeynta halista ayaa u baahaneysa in laga fekero:
suurtogalnimada in shaqaalaha gaareen COVID-19 iyaga oo qabanayaan doorka
cawaaqiibka suuragalka ah ee taas— tusaale ahaan, gudbinta bulshada.
WorkSafe ayaa hayso hagid aad u faahfaahsan ee qiimeynada halista ah.
Qiimeynta haddii door gaar ah u baahanyahay inay sameeyaan shaqaalaha tallaalan (external link)
Waajibaadyada sharciga shaqada jiray ayaa quseeyo. Kan waxaa ku jira:
isbadelo ku sameynta xeerarka iyo sharuudaha shaqada ee heshiiska ah
ka qeybgalka lagula tashanayo aaminaad wanaagsan
ka fogaanshaha takoorida sharci darada ah ee ku lidka ah shaqaalaha ee ku saleysan heerka tallaalka
aan qaadeynin tallaabada laga yaabo in si aan loo cudur daarin ay khasaare u keento shaqaalaha oo ku saleysan heerka tallaalka.
Ka shaqeynta xaduudka halista sareyso ama goobta Gooniyeynta iyo Karantiilka La maareeyo (MIQ)
Iyada oo tallaalka uusan qasab aheyn iyo shaqsiyaadka ay xor u yihiin inay doortaan haddii ay rabaan inay qaataan tallaalka COVID-19, dhammaan shaqada ku jirto MIQ ama goobaha xaduuda halista sareyso waa inay fuliyaan dad laga tallaalay COVID-19. Tani waxaa ku jiro shaqaalaha dowlada ee garoomada caalamiga ah, dakadaha iyo diyaaradaha.
Waxaa jiro ka dhaafid qaar ee midaan. Tusaale ahaan, qofka aan tallaalneyn ayaa loo ogolaan karaa inay galaan oo fuliyaan shaqo meeshaas ay muhiim u tahay illaalinta ama dhowrida nolosha qofka, caafimaadka ama badqabka xaalada degdega ah; ama waa loo ansixiyay ama looga baahanyahay sharci ahaan.
Sharuudaha tallaalka ee shaqaalaha joogo goobaha xaduuda halista sareyso
Sida loola macaamilo khilaafka
Haddii adiga iyo loo shaqeeyahaaga isku khilaaftaan wax ku saabsan haddii shaqo gaar ah u baahantahay inuu sameeyo kaliya shaqaale tallaalan, waxaad geli kartaa Adeega Xalinta Xiliga hore. Tani waxay bixisaa nidaam bilaash ah oo aan rasmi aheyn ee la isku dayo oo loogu xaliyo arimaha.
Adeega Xalinta Xiliga hore (external link)
Tallaalka iyo shaqada COVID-19 — Shaqada NZ (external link)